လုံးခင်းကနေ သာယာကုန်း ကျေးရွာဘက်အသွား လုံးခင်းကျေးရွာနဲ့ တစ်မိုင်အကွာ ဂေါက်ကွင်းအနီးမှာ ဒေသခံ ပြည်သူတွေကို အချိန်သုံးနာရီကြာတဲ့အထိ မြေပြင်မှာဝမ်းလျားမှောက် ရိုက်နှက်စစ်ဆေးပြီး ပစ္စည်းတွေ ယူသွားတာလို့ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒေသခံတစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA က သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ဒေသခံတွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို တစွန်းတစ ကြားနေရပေမယ့် ကာယကံရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်က လာရောက် တိုင်ကြားတာမျိုး မရှိသေးတဲ့အတွက် အဲဒီကိစ္စကို အတိအကျ မပြောနိုင်ဘူးလို့ အခုလို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
"အသံတွေတော့ ကြားနေရတယ်၊ စုံစမ်းကြည့်တော့ ဘာမှဖြစ်တာမရှိဘူး၊ ဘယ်သူကမှ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ သက်သေနဲ့ လာမပြောကြဘူး၊ မျက်မြင်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့ ကောလဟာလဆိုတော့ အတိအကျပြောလို့ကို မရဘူးဖြစ်နေတယ်"
လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ဟာ တာဝန်အရပစ္စည်းတွေကို ရှာဖွေသိမ်းဆည်းရတာလို့ ဒေသခံတွေကို ပြောကြားခဲ့ပြီး ပစ္စည်းတွေကို နောက်နေ့ ပြန်ပေးမယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း ဒေသခံတွေ သွားပြန်ယူတဲ့အခါမှာ အဲဒီလုံထိန်းတပ်ဖွဲ့က ပစ္စည်းတွေပြန်ပေးဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရေးယူခံရတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀၀ ကျော်ရှိ
ကချင်ပြည်နယ်က ရဲအရာရှိ ၇၀ ကျော်ကို နယ်မြေပြောင်းရွှေ့
ရဲတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့် ဆည်းပေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြောကြား
ဒုစရိုက်တွေ နှိမ်နင်းမယ်လို့ တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော
နေရပ်- Nay Pyi Daw
To,Anonymous--Your deed is very low minded. People become soldier and soldier become thieves, robbers, rapers ,killers of theirs own peoples, gods[monks] and total destroyers of Burma, but not all only those who did this crime.
Your deed is very low minded. People become police and police become thieves and robbers, but not all only those who did this crime.
Feb 02, 2013 03:29 AM
[Robbery Burma Police] they should deserved dead...
Feb 01, 2013 07:59 PM